वर्षाकोे भेलसँगै नदीमा अचानक बगेर आए यति धेरै चाँदीका सिक्का! सारा गाउँलेको भीड… – Taja Khawar
वर्षाकोे भेलसँगै नदीमा अचानक बगेर आए यति धेरै चाँदीका सिक्का! सारा गाउँलेको भीड…
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र ०३, २०७८ समय: ०:४१:५६
अहिले नेपाल भारत लगायतका केही स्थानमा निकै वर्षा भइरहेको छ । जसका कारण नदीको सतह बढेका छन् । बढेको नदीमा विभिन्न बस्तु बगाएर ल्याउँछ । तर भारत मध्य प्रदेशको एक नदीमा भने चाँदीको सिक्का बगाएर ल्याएको छ । केही गाउँलेहरु त्यहाँ चाँदीको सिक्का खोज्न पुगे । त्यो खबर थाहा पाएर सिक्का लुट्न पुरा गाउँले नदी किनारमा पुगेका छन् ।
अशोक नगरको पञ्चवाली गाउँबाट एउटा खबर आयो, जसले यो सुनेपछि सबैलाई चकित बनायो। भारी वर्षाको कारण सिन्ध नदीमा बहाव बढेको थियो, तर आइतबार बिहाननदीको पानी घट्यो, गाउँलेहरुले यहाँ बाट चाँदीको सिक्का पाए। यो खबर सारा गाउँमा जँगलको आ गो जस्तै फैलियो, जस पछि ठूलो संख्यामा गाउँलेहरु नदीको किनारमा चाँदीको सिक्का खोज्न थाले।
सिन्ध नदी तीन दिन सम्म भारी वर्षा को कारण बाढी मा थियो, तर सिन्ध नदीको पानी आइतबार बिहान घट्यो। जब केही गाउँलेहरु नदीको किनार बाट पानी कम भए पछि गए, उनीहरुले चाँदीको सिक्का पाए। यी चाँदीका सिक्काहरु धेरै विशेष देखिएका थिए, जसमा छाप ब्रिटिश शासन को समयमा बनाइएको थियो।
पहिले एक वा दुई सिक्का भेटिएका थिए, तर जब गाउँलेहरुले थप अनुसन्धान गरे, सात वा आठ यस्तै सिक्का यहाँ बाट भेटिए। यस पछि, ग्रामीणहरु लाई लाग्यो कि खजाना नदी मा कहीं बाट बग्यो। यो खबर गाउँ मा छिटो फैलियो, त्यसैले ग्रामीणहरु को एक ठूलो संख्या नदी को किनारमा पुग्यो र सिक्का को लागी खोज्न थाले।
यस मामिलामा, जब कोलारस एसडीपीओ संग कुरा गरीयो, उनले भने कि यो जानकारी सोशल मिडिया बाट प्राप्त भएको हो। घटनाको अनुसन्धान गर्न स्टेशन इन्चार्जलाई घटनास्थलमा पठाइएको छ। अहिलेसम्म यो स्पष्ट छैन कि यी सिक्काहरु कहाँ बाट आए। यद्यपि यी सिक्काको खबरले बजार तातेको छ।
केही मानिसहरु विश्वास गर्छन् कि यी सिक्काहरु, एक घर मा लुकाइएको थियो । बाढीले त्यसलाई बगायो । जबकि केहि मानिसहरु यो पनि भन्छन् कि धार्मिक आस्था को कारणले मानिसहरु नदी मा सिक्का दान गर्छन्। मानिसहरु भन्छन् कि यो हुन सक्छ कि जब बाढी को पानी घट्यो, उही सिक्का जो गाउँलेहरुले फेला पारे ।
Last Updated on: August 19th, 2021 at 12:41 am